Pérou : Raki-pahatsiarovana an’i Amazôna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2009 4:20 GMT
Noho ny antony maro samihafa dia mitahiry fahatsiarovana ny olona rehetra ka ohatra amin’izany ireo sary, ireo ampahan-tsary mihetsika izay matetika no natao ho an’ny tena manokana. Matetika, mipirina any amin’ny fitoeran’entana any ireo zavatra ireo, tsindraindray monja vao ifampizaràna amin’ny olona hafa. Kanefa dia mety ho taratasy fototra ho an’ny tantara, vavolombelon’ny vanim-potoana sy ireo toerana samihafa mba hahafahan’ireo taranaka hoavy mahita hoe toy inona ny fiainana taona maro tsy fantany tany aloha tany.
Toy izany no zavatra misy any amin’ny faritra Amazonie Peroviana sy ny renivohiny Iquitos, toerana iray izay marihana fa tsy feno ny rakitra toy izany ny tranombakoka ao aminy. Ny andrim-panjakana sasany dia manana tahiry maro momba azy, saingy noho ny tsy fisian’ny fitantanana mahombin'ny mpitàna birao, dia tsy navela loatra nitsirika azy ireny ny daholobe. . Ny sasantsasany, toy ny Theological Studies Center of the Amazon [es] (CETA fanafohezan-teny amin'ny teny Espaniôla) dia miezaka ny handahatra anaty lisitra [es] ireo antontan-taratasy mirakitra ny tantara eo am-pelan-tànany ary amin’ny fametrahana ampahany ho any anaty aterineto, toy ity lahatsoratra momba ny sarimihetsika peroviana ity [es], Na izany aza, ny ampahany betsaka amin’ireo antontan-taratasy dia mihidy any amin’ireo tranobe ao Iquitos. Ankehitriny, noho ireo blaogy sy ireo vohikala mizara sary sy ampahan-tsary mihetsika, dia mihamaro hatrany ireo antontan-taratasy mana-danja azon’ny rehetra jerena. Ny mpitoraka blaogy sasany dia mamoaka sora-tànana [manuscrits], ny hafa indray mahita ny sary sy ampahan-tsary mihetsika mikasika ny tanànany, maneho hoe nanao ahoana ny fivoaran’ny zavatra rehetra.
Tsy izay zavatra hita maso voatantara ihany no mandrafitra ny tantaran’ny tanàna iray. Isan’ny mandrary izany koa lovan-tsofina[es], ary ny toetran'ireo [es] niaina tao an-tanàna. Iza no sipa nalazan’ny taona 1930? Inona no fety tsy azo navela handalo fotsiny tany amin’ny taona 1940 tany? Iza no nanana ny trano tsara indrindra fony fotoanan’ny orinasa mpanodina caoutchou sy solika ? Tamingan-javatra fantatry ny besinimaro tamin’izany fotoana, nefa toa tsy misy mahatsiaro na iray aza amin’izao fotoana.
Ohatra fotsiny, ny blaogy Crónicas de Pacarmón [es] dia fitambaran'ireo vaovao sy tantara maro mikasika fanatanjahantena nosoratan'i Don Pablo Carmelo Montalván na fantatra kokoa amin'ny hoe “Pacarmon”, teraka tamin'ny 1906 tao X ary lasana tamin'ny 1983. Hatramin'ny 2005, ny zanany lahy Fernando dia namoaka ireo antontan-kevitra ireo tao amin'io blaogy io mba hahafahana mirakitra ireo fahalalana maro sy zavatra tsy nampoizina tamin'io fotoana io ahitàna koa ny fotoam-pitokanana kianja filalaovam-baolina iray vaovao tamin'ny 1927 [es].
Sary avy amin'ny Crónicas de Pacarmón ary nampiasaina rehefa nahazoana alalàna.
Any amina blaogy hafa, mamoaka boky iray izay nosoratan’ny rainy ny mpanoratra izay mitantara ny fandraisany anjara tamin’ny ady colombo-péruvienne : : Rehefa miantso ny tanindrazana [es].
Tamin’ny faran’ny taonjato faha 20, tsy noheverina hampiakarina ho hita amin’ny aterineto Irene ampahan-tsary mihetsika nalaina tanivom-pianakaviana ireny. Kanefa, ny zavatra hitan'Isaac ao amin’ny De La Selva su Web On [es] tsy ela akory izay, dia ampahan-tsary mihetsika roa nalaina fianakaviana nonina tao San Francisco, California momba ny tanànan'i Iquitos tany afovoan'ny taona 1980 tany. Azo jerena manaraka eto ambany ny voalohany ary ny faharoa kosa dia ato.
Ampaha-tsary mihetsika nampakarin'i Carme001
Ny zanakavavy, izay vao 10 taona monja tamin'izany fotoana, no nanapa-kevitra hampakatra ireo ampahan-tsary mihetsika. Tanatina resadresaka fanadihadiana, hoy izy manoratra, “antontan-taratasy mirakitra tantara ireo ; nihevitra aho fa hevitra tsara ny mizara izy ireo amin’izao tontolo izao.” Amin’ Isaac, tena ilaina ireo ampahan-tsary mihetsika ireo, afaka manampy ireo taranaka hoavy mba hahafantatra hoe ahoana ny fiovàn-javatra nisy, na be na kely:
Raha mihery an’io ampahan-tsary mihetsika io aho, dia mahatsapa ny lanjan’io karazana tahirin-kevitra momba ny tànanan-tsika ireo sy ny fiantraikany any amin’ireo mpizahatany izay tonga mijery ny tanintsika. Ireny vakoka fahatsiarovana ireny dia saiky any ivelan'ny firenentsika daholo no hita. Lehibe ny mahita fa ahafahantsika mamondrona ireny tahirim-pahalalana ireny ny aterineto..
Misy blaogy hafa misy ireo fampahalalana sy ireo tantara mahaliana ary ireo sary ntaolo izay mampiseho ny tantaran’i Iquitos taloha. Ohatra, Raúl Herrera Soria ao amin'nyAmazónico del Perú [es] manoratra momba ny fiaran-dalamby izay nivezivezy teny an-dàlamben'i Iquitos. Ity koa ohatra fampahalalana momba ny famonoana mahatsiravina natao an’ireo indizena niasa tao amin ’ny orinasa mpanamboatra caoutchouc tany amin'ny taona 1910. Hoy i Fernando Najar:
Folo taona taty aoriana, fantatra fa mihaotran’ny 30 000 ireo mpikamban’ny foko Witotos [foko indizena] izay novonoina ary 10 000 no nokaravasiana satria tsy nahatratra ireo fatrana caoutchouc nilain’ireo mpiandraikitra ireo toby 42 famokarana caoutchouc an’ny Casa Arana, izay The Peruvian Amazon Co amin’izao foroana izao . Ltd. voatahiry tany Londra.
Ao amin’ny blaogy Viajeros [es], mizara ny tantaran’ny vondrom-piarahamonina Punchana i Jesuer.
Raha mitambatra, ireny antontan-taratasy rehetra ireny dia manampy amin'ny fananganana sary iray maneho ny fiainana fahiny tao amin'ny faritra Amazôna ary fianarana ho an'ireo taranaka mbola hoavy.
nadikan'i Eduardo Avila